I-MetaCX: Lawula Ukuphila Kwamakhasimende Ngokubambisana Ngokuthengisa Okusekelwe Emiphumeleni | Martech Zone
Eminyakeni eyishumi eyedlule, ngisebenze nethalente elithile elimangalisayo embonini ye-SaaS - kufaka phakathi ukusebenza njengomphathi womkhiqizo kaScott McCorkle kanye neminyaka eminingi njengomxhumanisi wokuhlanganiswa osebenza noDave Duke. UScott wayengumqambi ongapheli owayekwazi ukweqa kunoma iyiphi inselelo. UDave wayengumphathi we-akhawunti oguqukayo osiza izinhlangano ezinkulu kakhulu emhlabeni ukuqinisekisa ukuthi okulindelwe kuyedlulwa.
Akumangazi ukuthi laba babili bahlangana, bacwaninga ubunzima ekuthengisweni kwe-B2B, ekuqalisweni nasekuthengisweni kwamakhasimende… futhi beza nesisombululo, I-MetaCX. IMetaCX yipulatifomu eyakhelwe ukuqinisekisa ukuthi abathengi nabathengisi basebenzisana ngokusobala ukubhala, ukulandelela, nokudlula imigomo yebhizinisi yekhasimende.
Ukubuka konke komkhiqizo we-MetaCX
Abathengi kwa-SaaS nezinkampani zemikhiqizo yedijithali bazizwa bengenakho ukuzethemba ukuthi izethembiso zokuthengisa zizogcinwa. Kwenzekani ngemuva kokuthi isivumelwano sisayinwe?
IMetaCX yakhe ipulatifomu eguqula indlela abahlinzeki nabathengi abahlangana ngayo futhi banqobe ndawonye. I-MetaCX inikeza isikhala esabiwe lapho abahlinzeki nabathengi bengachaza futhi balinganise imiphumela ndawonye, ​​ukuvumelanisa ukuthengisa, impumelelo, kanye namaqembu wokulethwa azungeze umthelela webhizinisi wangempela amakhasimende angalibona.
Ipulatifomu yokubambisana phakathi kwabathengi nabathengisi inikeza:
Izinhlelo Zempumelelo - Qinisekisa ukufezeka kwemiphumela yebhizinisi oyifunayo ngokwakha uhlelo lwezinyathelo ngezinyathelo kumthengi ngamunye.
Izibonisi - Khiqiza izifanekiso zohlelo lwempumelelo olwenzelwe amacala wokusetshenziswa athile nama-personas ukwenza lula nokukala ukuthengisa nempumelelo okusekelwe emiphumeleni.
Izaziso - Yaziswa uma ithemba noma ikhasimende lijoyina ibhuloho owabelane ngalo noma lixhumana nanoma iyiphi into yebhuloho ukuze ukwazi ukusabela ngesikhathi sangempela.
Izikhathi - Bungaza izikhathi ezibalulekile kumjikelezo wempilo yamakhasimende — ubudlelwano obusha, ukuqaliswa okuqediwe, nokusayinda ukuvuselelwa ukuze kubonakale umfutho ophambili.
Izigaba Zokuphila - Dala uhlelo lwempumelelo oluqondaniswe nazo zonke izigaba zokuphila ukuze kuqinisekiswe ukuthi wena namakhasimende akho nihlangabezana nezinhloso zesikhathi esifushane nesikhathi eside.
Izandla - Bona ngeso lengqondo i-handoff ngaphakathi kwe-MetaCX ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu usekhasini elifanayo futhi usebenzela izinhloso nezinhloso ezifanayo.
Bridges - Mema amakhasimende namathemba endaweni eyabiwe, enophawu lokubambisana lapho ungabhala futhi uhlanganyele khona mayelana nezinhlelo zempumelelo.
Amathimba - Yenza isipiliyoni samakhasimende siphile futhi uqale ukusebenzisana nababambiqhaza abafanele ngokwakha amaqembu abantu ahambelana nesigaba ngasinye sempilo.
Izixwayiso Zokugcinwa - Thola ubungozi bokugcina obufihliwe ngokulandela umkhondo wezenzo ezithile nokuziphatha okuveza amakhasimende asezowa.
Yonke imiphumela yohlelo lwempumelelo lwe-MetaCX iboshelwe emigudwini emikhulu nakumamethrikhi asebenzisa idatha ukulandela impumelelo yomphumela kuyo yonke impilo yamakhasimende.
Imiphumela amakhasimende akho ayikhathalelayo izothonya uhlobo lwedatha oyidonsayo kwi-MetaCX. Ungadonsa imicimbi kusuka kumkhiqizo wakho noma kusuka kolunye uhlelo kufaka phakathi i-CRM yakho, uhlelo lwezezimali, noma ipulatifomu yomcimbi. Lapho izinhlelo zakho zebhizinisi zondla imicimbi endaweni yesikhulumi ngokuxhumeka, i-MetaCX isebenzisa imibandela nezikhathi zokugcina ozicacisayo ukukutshela ukuthi ikhasimende lisondele kangakanani ekufezeni impumelelo.
Shintshela kufayela lami le- Martech Zone Izingxoxo Podcast ngengxoxo ezayo noMongameli weMetaCX uJake Sorofman.
Ulungele ukubona iMetaCX isebenza? Bhalisa namuhla futhi iqembu lizonikeza idemo ebukhoma yesikhulumi.
Cela i-MetaCX Demo
Tags: kpisUkumaketha kwe-Lifecycleizigaba zokuphilametacxlokubonisasaasimpilo ye-saasUkuphathwa kwe-saas lifecylceUkunika Amandla Ukuthengisaukuhlela impumelelo